Turkiga: Imaaraadka Carabta wuxuu taageeraa Ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Turkiga: Imaaraadka Carabta wuxuu taageeraa Ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya
Turkiga: Imaaraadka Carabta wuxuu taageeraa Ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya
Istanbul (Halqaran.com) – Dowladda Turkey ayaa Imaaraadka Carabta ku eedeysay inay qalalaase ka wadaan Bariga Dhexe, ayaga oo faro-gelinaya Libya iyo Yemen, eedeyntaas oo la filayo inay sare u qaaddo xiisadda labada dal.
Mevlut Cavusoglu oo ah wasiirka arrimaha dibedda ee Turkey ayaa hadalkan sheegay isaga oo ka jawaabaya cambaareyn ku saabsan kaalinta Turkey ee dagaalka Libya, halkaasi oo ay gaysay shaqaale Militari iyo dagaal-yahanno Syrian ah oo caawiya dowladda dalkaas ee caalamku aqoonsan yahay.
Sidoo kale, wasiirka arrimaha dibedda ee Turkey ayaa ku eedeeyey Imaaraadka Carabta inay taageerayaan kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya, halkaasi oo Turkey ay ku leeyihiin saldhig ay ku tababaraan ciidamada Soomaaliya.
Ugu dambeyn, hadalka Cavusoglu ayaa yimid kadib markii wasaaraddda arrimaha dibedda ee Ankara ay Isniintii ay cambaareysay bayaanka shanta dal, islamarkaana ku eedeysay Faransiiska “inay isku dayayaan inay noqdaan taageeraha isbaheysiga naceybka.”
Ilaa iyo hadda wax jawaab ah kama soo bixin Imaaraadka Carabta oo ku aadan eedeynta wasiirka arrimaha dibedda ee Turkey Mevlut Cavusoglu.